Calaf Weeyi Guure, Caashaqa Ha Ku Daalin. - jornalizem
Calaf Weeyi Guure, Caashaqa Ha Ku Daalin.
Way fududahay in wajiga laga biiyo ilmada, hase ahaate waxa aad u adag sidii qalbiga looga bin lahaa xanuunka soo gaadha. Jacaylku waa wax qof kasta ku dhici kara, markastana dhici kara, meel kastana ka dhici kara. Jacaylka, qufaca iyo urta cadarka midna lama qarin karo. Waana dhab dookha iyo jacaylkaba dadku way wadaagan.
Jacaylkuna waa mid ka mid ah dareemada iyo boholyowga ugu waa weyn ee dadku dareemo intuu noolyahay.waxase haddana taasi ka sii daran midka la dareemo marka la waayo wixii la jeclaaday. Jacaylku waa sida olol aan dameyn oo kale oo qofka ku shidan, waana ta had iyo jeer la yidhahdo jacayl biro ma goys oo biyo kama maydhaan. Jacaylku waa isha biligteeda oo kale, waxana suura gal ah in aad qof aragti keliya ku jeclaan kartid. Jacaylku waa sida hadh wareegaya oo kale oo kalba meel taagan, xiliyada jacaylkana waxa ka mid ah macaan iyo qadhaadh iyo farxad iyo naxdin.aramida jacaylkuna qofba sibay u taabataa inta la dhex mushaaxayo nolosha jacaylka.dadka intiisa badana marka caashaqa iyo jacaylku haleelaan waxa sahay u noqda duruufo adag sida murugo,welwel, walbahaar, damaq iyo xanuun,qalbi jab, niyad jab, xasilooni dari, hurdo la'aan, mancafa oo laga ga'o mashquul iyo mawjado fikiro ah, iwm. Maxaa yeelay naf jacayl hayo oo caashaq mirayo waxna
muhanaysaa waxa ku iman kara arimo badan.
Inkasta oo ay yar yihiin dadka qaar marka ay is jeclaadaan kalgacal iyo muxubana isu qadaan waxay noqdaan kuwo ku guulaysta, geedkii ay beerteena wuxu noqdaa mid midho u dhala. Hase ahaate dadka intiisa badan way ku guuldareystaan in ay ka midho dhaliyaan jaceylkooda,geedkii ubaxa ahaa ee ay isu dhiibeena wuxu noqdaa mid qaadha. Badanaa jacaylku mujtamaca siyaabo kale duwan ayuu ugu bilaabmaa.waxana xaqiiqo ah in aanu dadka intiisa badan ugu wada dhicin si dhab ah oo la dareemi karo. Si kastaba ha ahaate waxa la ogaaday in jacaylku ku iman karo hababkani.mid dhab ah,mid ku meel gaadh ah, mid danaysi ah, mid xushmo, mid istusnimo, mid guud iyo mid laab la kac ah.
Araartaasi ku saabsaneyd jaceylka hadaan halkaasi kaga gudubno,oo aan gudbo nuxurka maqaalkaygan, ayaa waxay noqoneysaa sidani:
Dhibta iyo dheefta jaceylka midkee bulshadeena ku badan?lamaanaha jaceyl in muddo ah u socday isku guursaday iyo kuwa si calaf ah u kulmay keeba badan? Waa maxay farqiga u dhaxeeya jacaylka dhaca guurka hortiis iyo jacaylka guurka dabadiisa dhaca? Maxaase keen in dad markii hore isjeclaa ay xurgufi u dhex timaado markay is guursadaan? Maxay ku kala duwan yihiin dadka iyaga oo is jecel is guursaday iyo kuwa intay calaf isku haleen jaceylkii u bilaabmay guurka dabadii?Xiiso jabka iyo niyad jabka soo foodsara dadka is jecel maxaa abuura? Maxaa guryo jaceyl lagu dhisay ay muddo yar gudaheed u dumaan? Maxaa been dumarka loogu soo xero geliyaa inta hore? Maxeyse kala kulmeen caashaqa dadkii jaceylku ku dhacay ee tariikhdu ina barayso? Lamanayaashu markay hasawayaan maxay isugu qariyaan arimo marka danbe ku soo bixi Kara? Maxaa sababa in lamaane in door ah wada jilayey sheeko ayna isu gudbin dabeecadooda dhabta ah? Jacaylka iyo caruurta midkee guriga
adkeeya? Maxaa sababa in lamaane muddo badana jaceyl wada jilayey ay mar qudha sida leeb qaanso ka booday uga dhex boodan jaceylkii?
Waxay qoraayada sheekooyinka jacaylka ah soo qoraa waxay in dhex geeyaan badweyn jaceyl ah oo lamaanuhu isu hagar baxayo, iyaga oo waliba muqaal halis ah inaga siinaya dhibtii ay u soo mareen jaceylkooda,waxey ina tusaan marxalad farxadu cirka isku shareerayso marka hore,hase ahaate wakhti aan fogeyn kadib ayey mar qudha shookaanta 360 degree dhinac u wada dhuftaan, waxaney sida bisad caano looga tagay ugaga tagaan murog mid ka mid ah lamaanihii u jilayey shekadooda.
Qoraagu si uu ugu helo dabadeetana sabab murugada curdinka ah ee uu abuurayo iyo lamaanaha kala haajiraya ee candhuuftooda dib uliqaya, wuxu inoo soo arooriyaa waayo aduun oo wax u dhimaya wacdarihii jacaylka. Wuxuuna inagu beerlaxawsadaa arimo ay ka mid yihiin,in lamanihii khilaaf soo kala dhexgalay, in waalidkood isku diiday, in midkood dhoofo, in gabadha ama inanka midkood la siiyo ruux kale, in midkood la kulmay xanuun kii kalena u samir wayey, in midkood khiyaamay kii kale kadibna uu soo ogaaday kuna dhigay, in la isku diray lamanaha oo gacan saddexaad ka dhex shaqeysay iwm. Carqaladahaasi uu abuuray qoraagu ayaana sababa in lamanihii ay is hanan wayaan, dulucda sheekadase ku jirtaa waa in 90% ayna suura gal aheyn in lagu guuleysto jaceylada la wada bilaabo,maxaa yeelay taasi waxa inoo cadeynaya shekooyin badan oo dadkeenu qoraan.waana dhif,dhif sheekada ku bilaabanta farxad kuna dhamaatay farxad ee lamaanuhu ku guuleystaan jaceylkooda.
Sidoo kale heesaha,riwaayadaha,iyo qeybo badan oo ka mid ah fanka iyo sugaanta somaalidu leedahay waxey hab cad u qeexaan in aan inta badan laga salgaadhin jaceylka,arintuna ay ku dhamaato waji gabax. Inta badan shekooyinka jaceylka waxa ku dhex qasan khibarado badan iyo casharo badan oo badweynta nolosha ka dhaca una baahan in laga taxadiro,qoraayada qaar waxey shekooyinkooda ku xusaan, dhibaatooyin jaceylka laga qaado, sida nabsi, dhimasho,aarsi, caafimaad daro iyo boog jaceyl oo aan bugsan muddo badan. Waxa sida daradeed haddaba inala gudboon in aan ogaano mushkiladahaasi oo aan ka feejignaano,maxaa yeelay ma sahlana qaarkood.
Qalbigu run ahaanti khalad ma laha waxna wuu jeclaan karaa,waana la jeclaan karaa hase ahaate waxa fiican in lala yimaado qorshe abuura in loo diyaar garoobo arinta jaceylka bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda, maaha in dadku u qaato si fudud,ama uu qof kale oo walaalkii ah ugu beero jaceyl si fudud isaga oo aan kala dabalaneyn marxaladihiisa, maanta waxaad arkeysaa dadkii oo si dhib yar ama muddo yar gudaheedba isku jeclaanaya, haddana inyar dabadeed kala boodaya,waxaad arkeysaa dadyow badan oo aan diyaar u aheyn jaceyl haddana qaar kale hodaya, waxaad arkeysaa dadyow badan oo balamo jaceyl ka dhexeyey haddana si fudud u burinaya iyaga oo aan nabsi iyo wax kale toona ka baqeyn.waxaad arkeysaa dad laba xidhiidh sameysanaya oo midba midka kale aanu ogeyn oo is khiyaamaya.waxaad arkeysaa dadyow afmacaan iyo beerlaxawsi uun ay arintoodu tahay oo aan qorshe kale laheyn.
Dadka qaar waxay jaceylka dadka ugu abuuran dan ah aad tabaatid jidhka lamaanaha kale,qaar kalena arinkoodu waa caqli iyo carab kala jira oo marka ay arkaan dad isjecel ama jaceyl la sameynayo ayey iyagun ku daydaan uun iyaga oo aan ogeyn wuxu xaal ku danbeyn doono. Maxaa yeelay markaad cid ku dayato iyo marka aad iskaa u go'aansato arintu way kala duwananeysaa.qeybo badan oo kalena waxey jaceylkooda ku xidhaan arimo kale sida quruxda iyo maalka qofka ay jecladaan marka quruxdii iyo maalkii ka dhamadana dhabarka ayey u jeediyaan.qaarkoodna wakhti lumis iwm ayeyba uga jeedaan xidhiidhada jaceyl ee ay la wadagaan lamanahooda kale. Dhacdooyinkani iyo kuwa kale oo ka sii badana maanta waxey ka dhex aloosan yihiin bulshadeena gaar ahaan bahweynta ku wada xidhiidha internetka oo run ahaantii waji cusub u furay wada xidhiidhka mujtamaca. Ka fogow haddaba akhriste in aad noqoto mid dadka hoda,hana isku galin caalamka jaceylka haddii aanad u hagar baxeyn
lamanahaaga waliba mudddo yar gudaheed.
Guurka oo calaf ah
Lamanaha jaceylkoodu guri gal keena wuu yar yahay sida ay tariikhda iyo casharada jaceylkuba ina barayaan,inta badana waa lagu guuldareystaa, waxana labada lamaane soo kale dhex gala duruufo iyo waayo aduun,waxana intooda badan ku dhaca markeliya waxaney islaheyn waligeed way dhici.dabadeed mid kamid ah ayaa halku dheg ka dhigta odhaahda ah." Hadaad adigu wacan tahay ani way iraacday". Qaar kale oo badana waxay isku dhafaan marka ay ishanan wayaan weedh ah "wajiyaal is xasuusta uun aan noqo".
Guurku inta badan si calaf ah ayuu u qabsooma kuna yimadaa,arintanina waa mid la dersay lana ogaaday, lamanaha jaceyl isku guursaday iyo kuwa si calaf ah isku helyna waxa badan kuwa calafkoodu isku qornaa ee ishelay. Taasina waxa ku cadeynaya dhacdooyin badan oo ka dhaca bulshadeena wakhtiga.waxaad arkeysaa dhalinyaro moddo badan wada sheekeysaneyey haddana marka ay u soo dhawadaan ujeedadii iyo guri yagleelidii ayuunbaa la is khilaafayaa,waxaad arkeysaa xitaa qaar isku mehersan oo intayna isla guri gelin kala boodaya, waxaad arkeysaa qaar muddo yar kadib marka ay is aroosaan kala haajiraya iwm. Dadkaasi kala firdhanaya dantuse ka dhaxeysey markii hore waxan isugu qorneyn calaf marka ma wada tiirin karaan nolosha danbe. Qof kastana wuxu tagayaa halkuu calafkiisu ku qornaa, wuxuna sugaya calafkiisa.calafkuna ma baaqdo.
Waxan ku soo gunaanadayaa akhriste jaceylku waa bad xeel dheer,waana bad marka uu qofku soo galo midna aad u wada cabo,midna inyar ka kabado,midna inta uu ku luqluqdo uu ka tago.sida daradeed adiga oo aan laheyn qorshe sax ah iyo tabaabusho dhameystiran ha isku gelin qorshe jaceyl naftaadana dhibane ha ka dhigin, naf qof kalena ha u soo jiidin walbahaar iyo caloolyow.ogowna in aaney fiicneyn oo ay xitaa dembi tahay in aad sanado badan qof wakhtiga ka lumiso adiga oo aan diyaar u aheyn in aad la guri gasho. Sidoo kalena ogow in 90% aan lagu guuleysan jaceylada dadku wada yeeshaan,guurkuna 90% wuxu u dhaca si calaf ah meel aanad ka fileyn iyo wakhti aanad filaynin ayuuna ku dhacaa.
9/14/2014 01:01:04 am